Hindiya: Hindiya iyo Ruushka ayaa doonaya inay xayiraan cunaqabataynta Mareykanka ee ku saabsan hanjabaadda iibka hubka | Wararka Hindiya - TELES RELAY
ACCUEIL » International India: Ruushka iyo Hindiya ayaa isku dayaya in ay burqadaan cunaqabteynta Mareykanka ee ku saabsan hanjabaadda hubka India News
Hindiya iyo Russia waxay ku heshiiyeen hab cusub oo lacag bixin ah iyada oo loo marayo lacagaha qaran ee loogu talagalay lacago badan oo bilyan oo dollar ah, si looga fogaado khatarta ay abuurtay khatarta cunaqabateynta Mareykanka iyo xayiraadda xayiraadaha .
Heshiiskan ayaa u ogolaan lahaa Hindiya in ay bixiso lacagta ugu horreysa ee laba maraakiib dagaal oo Ruushku u dhisayo ciidamadooda, ayaa sheegay in laba qof oo nasiib u yeeshay arrinta New Delhi, iyada oo aan wax faahfaahin dheeraad ah la siin. Heshiisyada difaaca ayaa lagu kala saari doonaa miisaaniyada iyo rupi iyagoo qayb ka ah heshiis bixinta u dhexeeya bangiyada dhexe ee Ruushka iyo Hindiya, ayaa sheegay in qof Moscow jooga uu ka warqabo diyaargarowga.
Inkastoo nidaamka cusub uu u horseedayo sii deynta balaayiin doollar oo ah lacagaha qandaraaska ah ee Ruushka, haddana waxay ku xiran tahay heshiiska Hindiya leh ee Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuusan ku soo rogin cunaqabateen aargoosi.
Ruushka ayaa ku dhibtoonaya inuu sii wado iibinta waaxda istiraatijiyadeed ee istiraatiijiga ah, taas oo ku xiran tahay bilyan Sano sannadkii hore, qayb ahaan sababtoo ah Cunaqabateynta Mareykanka hanjabay qof kasta oo iibiya hubka Ruushka. Inkasta oo Maraykanku uu sharciyadan u isticmaalo kaliya hal mar ilaa hadda - marka laga reebo Shiinaha - cabsida ayaa saaran dhoofinta Ruushka. Second dhoofinta hubka ugu weyn ee adduunka ka dib markii Mareykanka, Russia ka gaabsaday in uu 17% iibka hubka dibadda si 2014 2018, halka iibsadaan ka Hindiya iyo Venezuela hoos u dhaceen, sida laga soo xigtay Machadka Cilmi-baarista Nabadda ee Stockholm.
Markaad raadinayso ruqsadda
US Partner ee koraya, India ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay a xiriirka istaraatiijiyadeed dheer la Moscow ka xilligii Soviet dagaalkii qaboobaa. Inkastoo ay hoos u in iibka, Russia ayaa muujisay 58% ka mid ah hubka laga keeno oo ka yimid quruun ah South Asian muddo 2014-2018. Maraykanka ayaa riixay New Delhi, ilaa hadda ku guulaysan, inay kansasho heshiiska ka mid ah in ka badan 5 billion dollars for iibka ah ee nidaamka hawada Ruush gantaalada difaaca sare S-400, bast hanjabaad tallaabooyin ciqaab .
Hase yeeshee, Hindiya ayaa isku dayaysa in ay hesho iibka madaxweynaha ee Maraykanka ee iibsiga hubka. Turkiga, oo xubin ka ah Ururka Heshiiska North Atlantic Organization, ayaa wajahaya hanjabaadda cunaqabateynta Mareykanka ee S-400 oo ka timid Ruushka, oo bilaabay in la soo geliyo Jimcihii.
Bixinta S-400 ee Hindiya ayaa la filayaa inay bilaabato ka dib markii 2020 iyo "dhibaatooyinka lacag bixinta la xalliyey," ayuu ku yiri Adeegga Federaalka ee Federaalka ee Hawlgallada Militariga iyo Farsamada ee bishii hore, sida ay sheegtay wargayska Tass.
Promsvyazbank PJSC, amaahiya a Ruush ay dowladda ka taliso ayaa mas'uul ka ah maalgelinta warshadaha difaaca si ay u ilaaliyaan labada bangiyada gobolka ugu weyn, Sberbank iyo VTB, hanjabaad cunaqabatayn Maraykanka, ayaa diyaar u ah ka ciyaaraan door ku yahay macaamil xawaalad Indian. Ayaa sheegay in qofka Moscow.
Heshiiska Hindiya S-400 saxiixay bishii October waa qayb ka mid ah heshiisyo la Russia la qiimo ah marka la isku daro ee 10 billion. Waxaa ka mid ah wax soo saarka ee wadajirka ah ee helicopters Kamov Ka-226T qiimihiisu 1 bilyan iyo afar markab in Ciidamada Bada ee Hindiya, laba markab oo la dhisay ee Russia iyo laba in deked markab ah Indian under heshiiska iibsiga technology.
Ra'iisul Wasaaraha Narendra Modi haddadan ee March warshad qoriga saarka ee Amethi, taas oo soo saari doontaa qoryaha 750 000 Kalashnikov AK-203 oo qayb ka ah shirkad ay wada leeyihiin India iyo Russia.
Modi iyo Trump aan wada hadlay heshiis S-400 markii ay ku kulmeen ku maqnaa ee Group 20 ee Japan bishii hore, ayaa sheegay in suxufiyiinta iyo Xoghaya Arrimaha Dibedda Vijay Gokhale ka dib Wareysiyada. "Dhibaato ma saameyn doonto xiriirka istiraatiijiga ah ee u dhaxeeya India iyo Maraykanka," ayuu yiri.
Lacagta la joojiyay
Ka dib markii xayiraad ah oo ka mid ah dhoofinta hubka Ruush Rosoboronexport ee United States dhamaadka 2017 ah, Bank State of India joojiyay lacagaha Russia hubka iibsadaan ay, ayaa sheegay in qof aqoon u leh arrinta.
Sharciga 2017 on dagaalka ka dhanka ah soo horjeeda American by xayiraad, loo yaqaan CAATSA soo rogay cunaqabatayn on shakhsiyaadka iyo hay'adaha kan og sameeyey macaamilka ganacsi weyn la warshadaha difaaca iyo sirdoonka reer Russia. Waaxda State Mareykanka ayaa go'aan ka gaaraya in uu macaamilka yahay weyn hoos sharciga, halka sharciga 2019 on oggolaansho Difaaca Qaranka siinayaa qaado cuna qabateyn madaxweynaha.
Ra'iisul Wasaaraha Arrimaha Dibadda, Vellamvelly Muraleedharan ayaa sheegay in Baarlamaanka in dalka u baahan yahay S-400 la "cad" United States inta lagu guda jiro booqashada Xoghayaha Arrimaha Dibedda Mike Pompeo ee June.
Baanka Ruushku kama jawaabin codsiga faallooyinka. Bangiga Dhexe ee India iyo Promsvyazbank kama aysan jawaabin codsiyada faallooyinka. Afhayeen u hadlay Wasaaradda Difaaca ayaa diiday in ay faallo ka bixiyaan.
Bishii hore ee la soo dhaafay, VTB ayaa beenisay warbixinta in ay ka baaraandegi doonto lacagaha Hindiya ee iibsiga hubka, sidaas darteed iska ilaalinta isticmaalka dollarka.
"Waxa uu ahaa cad, tan iyo bilowgii in ay doonayn inuu shaqeeyo ama euros sababtoo ah nidaamka dhaqaale ee caalamka ugu tiirsanaan Maraykanka in mid ka mid ma dhici doono si arrintan loo sameeyo," ayuu yiri Ruslan Pukhov, oo madax ka ah Xarunta Falanqaynta Xeeladaha iyo Technologies, oo ah lataliyaha warshadaha difaaca ee magaalada Moscow. "Russia waxa uu isku dayayaa in uu soo nooleeyo dhaqanka ah in aan lahaa in times Soofiyeeti by baabi'inta rupees iyo rubles," ayuu yiri Mr. Pukhov.
suufiyadoodii Eebayaal A Trump "Waa lagama yaabo, sida ay abuuri lahaa tusaale ah wadi karin," ayuu yiri Scott Jones, kuwaas oo la talinta shirkad fadhigeedu in TradeSecure, ku salaysan ee dalka Mareykanka kala taliya dawladaha ee xakamaynta iyo ciqaabaan dhoofinta hubka. "Gadashada qalabka military ka Rosoboronexport waa xadgudub ku ah cunaqabateynta. Sidaa darteed, haddii xawilaadda caawimada ee dollars, pesos ama rupees, in aysan waxba ka beddelin baaxadda cunaqabatayn. "